यी हुन् ‘पैसा श्रीमती’ ! जो–कसैलाई विचलित बनाउने मार्मिक कथा
Friday, 21 Sep, 2018 3:18 PM
५ असोज, काठमाडौं । पढ्दै जाँदा विचलित पार्न सक्छ । तर, संसारमा यस्ता पनि कुरिती छन् । सात–आठ वर्षका कलिका केटीहरुलाई ८०–९० वर्षका बुढा पुरुषको जिम्मा लगाइन्छ, ‘पैसा श्रीमती’ बनाएर ।
‘मलाई समात्न मानिसहरु राखिएको थियो ता कि त्यो मान्छे मसँग सुत्न सकोस् । तीन पुरुष र एक महिलाले मलाई समातेर ढलाए र त्यो मान्छे मसँग सुत्यो’ : डोरोथी ‘पैसा श्रीमती’
बच्चै हुँदा ‘पैसा श्रीमती’को रुपमा बेचिएकी डारोथीले ती दिन् सम्झिइन् । डोरोथीलाई उनका हजुरबाका उमेरको मानिसँग विवाह गरिदिएका थिए उनकी आमा र काकाले । अर्थात् उनी त्यो पुरुषसँग बेचिएकी थिइन् । ‘त्यसपछि म गर्भवती भएँ । सानै थिएँ, १२ वर्ष पनि पुगेकी थिइनँ,’ यो पीडा सुनाउँदासम्म डोरोथी आँखाबाट आँशु खसिसक्छ ।
अर्की युवती खुशियाली ‘पैसा श्रीमती’को उही पीडा छ ।
‘त्यो मान्छे बुढो थियो । त्यसैले मसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनथ्यो । मसँग झगडा गथ्र्यो र पिट्थ्यो । उसले मलाई मारे पनि कसैले केही नभन्ने बताउँथ्यो । म उसकी ‘पैसा श्रीमती’ थिएँ । म उसको रगत रे’ : खुशियाली ‘पैसा श्रीमती’
यो प्रचलन दक्षिण पूर्वी नाइजेरियाको हो । त्यहाँका बेचेभे समुदायमा ‘पैसाका लागि विवाह’को प्रचलन छ । कलिला केटीहरु ऋण तिर्नका लागि बेचिन्छन् । पैसाका लागि किनबेच गरिएका केटीहरु पुरुषका सम्पत्ती बन्छन् । कसैलाई बाल श्रमिक बनाइन्छ, कसैलाई अर्कै पुरुषकहाँ बेचिन्छ ।
बाल अधिकारकर्मी पादरी अकोनाम रिचार्डस भन्छन्, ‘कसैलाई बाल श्रमिक बनाइन्छ, कसैलाई अर्कै पुरुषकहाँ बेचिन्छ । र उनीहरु गर्भवती बनेर घर फर्के भने ती पुरुषहरु खुसी हुन्छन् । किनभने त्यो पनि पैसा हो ।’
तर, बेचेभे समुदायका प्रमुख सण्डे इचिल भने सन् १९९० को दशकदेखि त्यस्तो काम बन्द भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘मानिसहरु अझ पनि त्यस्तै भइरहेको छ भन्ठान्छन् तर, सन् १९९० को दशकदेखि नै त्यस्तो काम भएको छैन ।’
सन् २००९ मा ‘पैसा विवाह’लाई अवैधानिक बनाइएको थियो । तर कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । अधिकारकर्मीहरु भने केही दिनअघि मात्रै एउटी सात वर्षकी केटीको उद्दार गरेको बताउँछन् । उनीहरुको प्रश्न छ, ‘संसारका कुनै पनि कुनामा रहेका बच्चाहरुको जस्तै यी केटीहरुको अधिकार के भयो ? किन यिनीहरु अधिकारबाट बञ्चित पारिएका ? बिबिसी